Baarlamanka Soomaaliya oo diiday Miisaaniyada sanadka 2013 ee Dowlada – SBC
Baarlamanka Soomaaliya oo diiday Miisaaniyada sanadka 2013 ee Dowlada
Posted by Webmaster on December 26, 2012 Comments
Xildhibaanada Baarlamanka Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay isugu yimaadeen holka shirarka guriga shacabka waxa ay maalintii sedaxaad kaga hadleen cod diidmo ahna ku meel mariyeen Miisaaniyada Sanadka Soo socda ee ay soo gudbisay wasaarada Maaliyada Soomaaliya.
Waxaa uu ahaa kulanka maanta mid la mid ahaa kulamada maalmihii maanta ka horeeyay ee laga doodayay Miisaaniyada, waxaana xildhibaanada dhexmartay dood kulul oo ugu dambeyntii laga soo saaray go’aan codbixin ahaa.
Gudoomiyaha baarlamanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari ayaa ku dhawaaqay natiijada ka dib cod bixin la tiriyay waxaana uu sheegay in ku dhowad 70 xildhibaan ay dib ugu celiyeen wasaarada maaliyada miisaaniyada ay soo qorsheysay sanadka soo socda.
Waxa uu intaasi ku daray in aanay ansax aheyn miisaaniyada dibna wax ka bedel loogu soo sameeyo .
Maalmihii la soo dhaafay ayay xildhibaanada ka lahaayeen meel marinta miisaaniydan dood kulul oo siweyn la isugula falanqeeyay taas oo maanta ku soo gaba gabowday in la ansixin waayo.